अध्यक्ष प्रचण्ड संग यसरी भएको थियो सिता दाहाल को बिहे हेर्नुहोस —
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड संग यसरी भएको थियो सिता दाहाल को बिहे : काठमान्डू : आज बैसाख २६ गते को दिन नेकपा का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संग सिता पौडेल बीच बिवाह भएको पनि आज ठ्याक्कै ५० वर्ष पुगेछ ! विवाहको ५० वर्ष पुगेको सुनौलो बशागाठ को अवसर मा सिता र प्रचण्ड दम्पतिबीच आज साझ ५ बजे सिन्दुर हालेर पुन बिवाह को कार्यक्रम पनि रहेको छ ! यसै बिषय मा सिता र प्रचण्ड को बिवाह कसरि भएको थियो त के कस्ता कठिनाइहरु भोग्नुपरेको थियो युद्दकालमा सिता दाहालको भूमिका के केस्तो रह्यो भन्ने लगाएत को बारेमा सिता पौडेल संग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ !
उसबेला त दुब्लो पातलो नै हुनुहुन्थ्यो । बुढेसकाल लागेपछि मोटाउन थाल्नुभएको हो । उहाँको तौल त ठ्याक्कै थाहा छैन । भनिन्छ, पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुँदा पार्टी फुट्नबाट जोगाउन तपाईंको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुभएको थियो ? मैले पार्टीमा एकता कायम हुनुपर्छ भनेर खेलेको भूमिका पार्टीबाहिर र भित्र दुवैतिर थाहा भइसकेको कुरा हो । त्योबेला मैले आफूले कुनैपनि हालतमा पार्टी फुट्नुहुँदैन, एकता हुनैपर्छ भनेर अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराई दुवैलाई दबाब दिएकी थिएँ । चुनवाड बैठकभन्दा अघिल्लो बैठक……मा म बिरामी थिएँ । म भारतमा उपचाररत थिएँ । पार्टीभित्र कच्याकुच्युक त पहिलादेखि नै भइरहेको थियो । त्यो बैठकमा धेरै नै विवाद भयो रे भनेपछि मलाई एकदम चिन्ता लाग्न थाल्यो । म नगएर गल्ती गरिछु भन्ने लाग्यो ।
भोलिपल्ट बिहान ९ बजेको थियो होला । उहाँले ‘म जान्छु’ भन्न थाल्नुभयो । मलाई के लागेको थियो भने सुरेशजी त यता–उता भाषण गर्दै हिडिराख्ने मान्छे, त्यहाँ सुरक्षित नहुनसक्छ । त्यसैले श्रीमान्लाई सम्झाउने तरिकाले कुरा गरेँ । ‘उहाँहरू कोठामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो बुझेर मात्रै जानुपर्छ भनें । त्यसपछि उहाँले स्टाफलाई फोन गरेर सुरेशजीकहाँ बुझ्न लगाउनुभो । पहिलोपटक जाँदा नभएको खबर लिएर साथी आउनुभएछ । दोस्रोपटक बादलजीको स्टाफलाई पठाउँदा त त्यहाँको चिया पसलेले भनेछन्, ‘ती मान्छेहरूलाई त बेलुकै पुलिसले लगिसक्यो ।’ त्यसरी यी दुइटा घटनामा म नजिकबाट सामेल भएको छु ।
राजेन्द्र महर्जन, चन्द्र खाकी, चन्द्रलाल गिरी
स्रोतः ‘जनयुद्धका नायक’ सेतोपाटि बाट साभार
अब विखण्डनको राजनीति छाड्छु , प्रधानमन्त्रीसँग सम्बोधन गर्छु ..- सिके राउत
काठमान्डू फागुन २४ गते शुक्रबार : सिके राउत ले अब बिखण्डनको राजनीति छोड्ने भएका छन् !...